त्यसपछि उनको त्यो पार्ट हेर्दा डाक्टर परे चकित ! – Dailny NpNews
त्यसपछि उनको त्यो पार्ट हेर्दा डाक्टर परे चकित !
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २५, २०७८ समय: १८:०१:३१
छिमेकी मुलुक भारतको गुवाहाटीमा एउटा निकै दर्दनाक तथा अनौठो घटना भएको छ । एकजना युवकले मोबाइल चार्ज गर्ने २ फिट लामो चार्जर केवल आफ्नोगोप्य पार्टी भित्र छि’राए । त्यो चार्जर केवल उनको प्राइभेटपार्ट भित्र छि’रेर मु’त्रथै’ली’मा पुग्यो ।
यौ’न स’न्तु’ष्टि’का ला’गि चा’र्जर केवल छि’राएपछि अ’त्ताल्लि’एका ती युवक र’न्थनिँदै अस्पतालमा पुगे । तर डाक्टरसँग उनले साँचो कुरा बताएनन् । आफुले चार्जर केवल मुखबाट निलेको भन्दै उनले डाक्टरसँग बताए ।
डाक्टरहरुले पनि उनले भने बमोजिम चेकजाँच गरे । दिसा परीक्ष र इन्डोस्कोपी लगायतका जाँच गर्दा समेत डाक्टरहरुले उनको पेटमा निलेको भनिएको तारको कुनै संकेत फेला पारेनन् । तरपनि डाक्टरहरुले उनको पेटको शल्यक्रिया गरे । तथापि शल्यक्रिया गरी पेट चि’रे’र हेर्दा समेत पेटमा कुनै केवल फेला परेन ।
त्यसपछि उनको शल्यक्रिया कक्षमै पेटको सबै भागको एक्सरे गरियो । जब डाक्टरहरुले एक्स रे रिपोर्ट हेरे तब उनीहरु तिनछक परे । उनले निलेको भनिएको केवल उनको पेटमा थिएन, त्यो उनको मु’त्रथै’ली भित्र थियो ।
३० वर्षका ती युवकले आफुले चार्जर केवल निलेको भनेर ढाँटेका रहेछन् । डाक्टरहरुले त्यसपछि तत्कालै उनको मु’त्रथै’लीबाट उक्त तार बाहिर निकालिदिए । उनको शल्यक्रिया सफल भएको र अहिले स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको बताइएको छ ।
उनको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरका अनुसार ती युवक यु’रेथ्र’ल सा’उ’न्डि’ङ भनिने यौ’ ‘न स’म्बन्धी म’नोरो’गबाट पी’डित रहेछन् । यो रोग भएका मानिसहरुले आफ्नो गो’प्य पा’र्ट विभिन्न खाले त’रल तथा ठोस प’दा’र्थ’ह’रु भि’त्र छि’रा’एर मै’थु’न ग’री यौ’न आ’नन्द प्रा’प्त गर्ने गर्दछन् ।
ती युवक चार्जर केवल छि’रा’एको पाँच दिनपछि मात्र पे’ट दुख्यो भन्दै अस्पताल गएका छन् । डाक्टरहरुका अनुसार यो म’नोरो’ग एक दुर्लभ मनोरोग हो । तथापि यस्ता घटना बेला बेलामा भैरहन्छन् । ती युवकले निकै च’रम व्यवहार देखाएका कारण चार्जर केवल छि’रा’ए’र मु’त्रथै’लीमै पूराएको डाक्टरको भनाई छ । एजेन्सीको सहयोगमा